Dareenka QARSOON Ee Ay PSG Ka Qabto Inay Real Madrid Ku Aaday Wareega 16-ka Champions League Oo Banaanka La Keenay - Laacib
HomePSGDareenka QARSOON Ee Ay PSG Ka Qabto Inay Real Madrid Ku Aaday Wareega 16-ka Champions League Oo Banaanka La Keenay
Dareenka QARSOON Ee Ay PSG Ka Qabto Inay Real Madrid Ku Aaday Wareega 16-ka Champions League Oo Banaanka La Keenay
December 15, 2021 Apdihakem Omer Adam
Sida uu sheegayo wargeyska MARCA, kooxda caasimada France ee Paris Saint-Germain ayaa qabta dareenka qarsoodiga ah ee ah inay ka cabsanaydo in ku aadisteeda Real Madrid ay sababi karto inay xilli hore ka hadho Champions League.
UEFA ayaa Isniintii toddobaadkan samaysay isku aadka wareega 16-ka ee Champions League, dhacdadaas ayaa ahayd mid aysan ku yarayn muranadu waxaana ay ragga samaynayay isku aadku sameeyeen qaladaad waaweyn.
Isku aadka hore ee qaldanaa ayaa ahaa mid ay isku beegmeen PSG iyo Manchester United taas oo ka dhignayd in Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ay dib u kulmi doonaan, dhinaceeda Real Madrid ayaa ku aaday SL Benfica.
Si kastaba, dookha kaliya ee u banaan UEFA ayaa ahaa inay dib u samayso isku aadka waxaana uu isku dhaca kale keenay inay isku beegmaan Real Madrid iyo PSG halka ay Man United ku aaday Atletico Madrid.
Real Madrid ayaa dhinaceeda ka cadhaysan inay UEFA ku dareen isku aadka labaad maadaama kahor qaladkii dhacay iyaga iyo Benfica la isku beegay oo ay u arkayeen inaysan jirin sabab loogu daro markii labaad isku aadka.
Haatan, MARCA ayaa sheegaya in PSG iyo tababare Mauricio Pochettino ay ka warqabaan halista kooxda 13-ka jeer kusoo guuleysatay Champions League kana cabsanayaan inay ku sababto inay xilli hore ka hadhaan loolanka.
PSG ayaa ku rajo weyn in kooxdeedu ay qaab ciyaareed fiican geli doonto bisha February marka kulamada Real Madrid dhacayaan oo is-faham midka haatan ka badani dhex mari doono ciyaaryahanada kooxdooda.
Paris ayaa suuqii xagaaga ee sanadkan sameeyay saxeexyo heer sarre ah oo kala ahaa Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum iyo Nuno Mendes.